UMiami angangena ngaphansi kwamanzi ngaphambi kokuphela kwekhulu leminyaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMiami angangena ngaphansi kwamanzi ngaphambi kokuphela kwekhulu
Miami Idolobha elisogwini lapho kuhlala khona abantu abangaphezu kwezigidi ezinhlanu. Isimo sezulu lapho sikwenze kwaba ngenye yezindawo eziheha kakhulu emhlabeni, futhi okusho ukuthi, ngubani ongathandi ukuhlala endaweni enamazinga okushisa aphansi unyaka wonke?
Kodwa le ndawo enhle iphakama cishe ngamamitha amabili ngaphezu kogu lolwandle. Kuncane kakhulu uma sibheka ukuthi izilwandle zingakhuphuka ngamamitha amane ngasekupheleni kwekhulu leminyaka. Ukuze, ngaphezulu kokucwiliswa ngokuphelele ngokocwaningo olushicilelwe ephephandabeni i-'Sayensi '.
Ukuncibilika kwezigxobo kuyinqubo yokuthi, ngenxa yokwanda kwamazinga okushisa, iba enganqandeki. Umbhali wocwaningo, uTwila Moon, wase-University of Colorado (United States), ucabanga ukuthi »ingxenye enkulu yokuncibilika ayinakulungiseka futhi ingumphumela wokushintsha kwesimo sezulu okubangelwa ngumuntu». Vele, lonke lelo qhwa elincibilikile kumele liye kwenye indawo, olwandle, lenze izinga lalo likhule ngokuqhubekayo.
Uma kungathathwa zinyathelo ezisebenza ngempela, »sizobona ukuthi uMiami unyamalala kanjani ngaphansi kwamanziKusho uMoon. Yize kungeyona iMiami kuphela, kepha nawo wonke amadolobha asezingeni eliphansi kakhulu ngaphezu kogu lolwandle, njengeVenice, iBuenos Aires, iShanghai, noma iLos Angeles.
Futhi, udinga ukukhumbula lokho izinguzunga zeqhwa ziyimithombo yamanzi ebaluleke kakhulu ezifundeni eziningi zomhlaba. Uma zinyamalala, imvelo yazo izokufa, okuzodala ukufuduka kwabantu okukhulu, nakho konke lokhu okuzohlanganisa (izingxabano ezihlomile, ukungabi nezinsizakusebenza, ukwanda kwamanani okudla, phakathi kokunye).
Ngokwezibalo zakamuva, Ama-52% eqhwa elincane laseSwitzerland azonyamalala eminyakeni engama-25 ezayo, kanti entshonalanga yeCanada izobe ingenayo i-70% yayo ngo-2100.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » UMiami angangena ngaphansi kwamanzi ngaphambi kokuphela kwekhulu